Online Yedzidzo yeFrench yeVana | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Kuvandudza hunyanzvi hwako hwedzidzo muFrenchAcademic French
Vadzidzi vachadzidza zvese zvepakati grammar concepts zvinodiwa kuti vagadzirise kunyatsoita kwavo, kugona uye kugona kwemaitiro muFrench.
Iyi ikirasi inofambidzana uko vadzidzi vane mukana wekushandisa girama uye kudzidza nezvemirairo kuburikidza nekuwana, nekutungamira kwemudzidzisi uye kumwe kutsanangurwa kwakadzama.
Kusimbiswa kwakawanda kunoiswa pakugona kutaura uchishandisa iwo magirama mapeji ari kudzidzwa nenzira kwayo.
Kirasi inopa vatori vechikamu mikana yakawanda yekudzidzira nekuvandudza kwake / kugona kwake.
Makambani - Mugovera
Pakati - Mugovera